कोरोना खोप लगाएकी स्वयंसेविका भन्छिन्- अब त कोरोना नसर्ला नि! :: Setopati
कोरोना खोप लगाएकी स्वयंसेविका भन्छिन्- अब त कोरोना नसर्ला नि! गण्डकीमा १७ हजार ६३० जनालाई लगाइँदै कोरोना खोप
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, माघ १४
कोरोनाको खोप लगाएपछि कार्ड देखाउँदै स्वयंसेविका तुलसी भण्डारी।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ ढिकुरपोखरीका तुलसी भण्डारी स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन्।
गाउँमा कोही बिरामी हुँदा होस् या बालबालिकालाई खोप लगाउन महिला स्वयंसेविका नै परिचालन हुन्छन्। गाउँभरिका मानिसको स्वास्थ्य स्थिति महिला स्वयंसेविकाले निरीक्षण गरिरहेका हुन्छन्। गाउँमा कसको स्वास्थ्य स्थिति के छ ? कति जना सुत्केरी छन् र कति जना खोप लगाउनुपर्ने बालबालिका छन्, सबै भण्डारीलाई कण्ठै छ।
गाउँभरिका बालबालिका बटुलेर खोप केन्द्रमा पुर्‍याउने तिनै भण्डारी बुधबार भने आफैं खोप लगाउन पोखरा झरिन्।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुगेर उनले खोप लगाइन् र भनिन्– अब त मरिँदैन नि!
सरकारले बुधबारदेखि देशव्यापी कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप लगाउँदैछ।
पहिलो चरणमा कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतले खोप लगाउँदैछन्।
ढिकुरपोखरीबाट यही कोरोनाविरूद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप लगाउन आएकी भण्डारीले अब कोरोना भाइरस नलाग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
‘अहिलेसम्म कोरोनाबाट जोगिएको थिएँ’, उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘खोप लगाएपछि त कोरोना नसर्ला नि!’
कोरोना महामारीविरूद्धको लडाइँमा गाउँमा उनी सक्रिय भएकी थिइन्।
गाउँमा कोरोना सचेतना जगाउन घर-घरमा पुगेर उनले मास्क लगाउनेदेखि साबुनपानीले मिचेर हात धुन सिकाएकी थिइन्।
स्वास्थ्य चौकीले दिएको कोरोनाबाट जोगिने उपायबारेको पर्चा घर-घरमा पुर्‍याएकी थिइन्।
बुधबार पहिलो डोज खोप लिएकी भण्डारीले अबको एक महिनापछि दोस्रो डोज लिनेछिन्। दोस्रो डोज खोप लगाएपछि उनलाई कोरोनाको खोप पूरा हुनेछ।
भण्डारीजस्तै अहिले पोखरामा स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मी खोप लगाउन लामबद्ध भएका छन्।
कोरोनाविरूद्धको खोप दिन पोखरामा मात्र ४ ठाउँमा खोप बुथ राखिएको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज र लेखनाथ स्थित संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा कोरोनाको खोप लगाइँदैछ।
भारतले अनुदान दिएको खोप गण्डकी प्रदेशमा ३९ हजार १३९ डोज आइपुगेको थियो।
गत आइतबार आइपुगेको खोप सोमबार र मंगलबार गण्डकीका ११ वटै जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइएको गण्डकीका आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले बताए।
अहिले भएको खोपले कोरोनाविरूद्धको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई लगाउन पुग्ने उनले बताए।
पोखरामा मात्र होइन, जिल्ला अस्पतालहरूबाट पनि बुधबार यो खोप लगाइँदैछ।
गण्डकीमा पहिलो चरणको कोरोनाविरूद्धको खोप १७ हजार ६३० जनाले लगाउँदैछन्। उनीहरूले अब १ महिनापछि दोस्रो डोज लिएपछि कोरोनाविरूद्धको खोप पूरा हुने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए।
कोरोनाविरूद्धको खोप अहिले सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र होइन, निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि लगाइँदैछ।
‘कोरोनाविरूद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैले पहिलो चरणमा यो खोप लगाउनुहुन्छ’, डा. शर्माले भने, ‘एक महिना पछिको दोस्रो डोज खोप लगाउन पनि अहिले भएकै खोपले पुग्छ।’
गण्डकीमा कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापाबाट सुरू गरिएको थियो।
डा. थापाले खोप लगाएपछि आफूलाई कुनै असर नदेखिएको बताए।
कोरोना महामारी सुरू भएको १ वर्षपछि खोप लगाउन पाएका थापाले यो खोप प्रभावकारी हुने विश्वास लिए।
‘कोरोनाको उपचार खोप नआउँदासम्म भौतिक दूरी र मास्क भन्दै आएका थियौं’, डा. थापाले भने, ‘आम जनमानसमा असर गर्छ कि भन्ने हल्ला छ, यो खोप सुरक्षित भएको सबैलाई भन्न चाहन्छु।’
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेर परीक्षण भइसकेको खोप कोभिसिल्ड अहिले भारतमा उत्पादन भइरहेको छ।
त्यही खोप भारत सरकारको अनुदानमा १० लाख डोज खोप नेपाल आएको थियो। कोभिसिल्ड ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको भन्दै डा. थापाले सामान्य असर देखिए पनि आफैं ठिक हुने बताए।
‘कसै-कसैलाई सामान्य टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रूघा लाग्नेजस्ता असर देखिन सक्ने भनिएको छ’, डा. थापाले सेतोपाटीलाई भने, ‘मैले खोप लगाएको ३ घण्टा भइसक्यो, अहिलेसम्म मलाई केही भएको छैन, अफिसमा काम गर्दैछु।’
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालकै प्रयोगशाला निर्देशक डा. मोनी सुवेदीले पनि खोप लगाएपछि आफूलाई कुनै असर नदेखिएको बताइन्।
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक यही अस्पतालको प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको परीक्षण थालिएको थियो।
चैत १७ गतेदेखि कोरोना परीक्षण थाले पनि डा. सुवेदीलाई भने अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएको थिएन।
‘कतिपय स्वास्थ्यकर्मी नै खोपबारे अन्यौलमा थिए’, डा. मोनीले भनिन्, ‘खोप लगाउन थालेपछि सबै जनाले खोपप्रति विश्वास गरेका छन्।’
नेपालको लागि कोभिसिल्ड खोप नै उपयुक्त रहेको समेत उपकुलपति डा. थापाले बताए।
‘अमेरिकामा बनेको खोप माइनस ८० डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने भनिएको छ, हामीकहाँ त्यस्तो पूर्वाधार छैन’, उनले भने, ‘यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न मिल्छ, हामीलाई यही उपयुक्त छ।’
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म १५ हजार ४३७ जना कोरोना संक्रमित छन्। जसमध्ये १४ हजार ७९४ जना निको भइसकेका छन् भने २०३ जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गइसकेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म १ लाख २६ हजार ११७ जनाको कोरोना परीक्षण भइसकेको छ।
पहिलो चरणमा खोप अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायतले खोप लगाइसकेपछि आमसर्वसाधारणलाई खोप लगाउने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए।
‘कहिलेदेखि सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउँछन् भन्ने कुरा सरकारले भन्ने हो’, उनले भने, ‘अब हामी सुरक्षित भएर सर्वसाधारणलाई खोप लगाउन तयार भइसक्यौं।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७, ०३:०८:००
अपहरण मुद्दाका फरार आरोपित १४ वर्षपछि पक्राउ
महोत्तरीमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रुको मृत्यु
भारतबाट नेपाल फर्किन लागेका चार जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु
नागढुंगाबाट लागुऔषधसहित १३ वर्षीय बालक पक्राउ
देवदहमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको डिन कार्यालय संचालन